गलवान भिडन्त: भारतीयको नियोजित उक्साहट – Karnalisandesh
गलवान भिडन्त: भारतीयको नियोजित उक्साहट
प्रकाशित मितिः ६ असार २०७७, शनिबार १५:५८ June 20, 2020
काठमाडौँ। चीनले पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदै दुई देशको सीमा क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सुरक्षाकर्मीबीच भएको भिडन्तलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीको नियोजित उक्साहट भनेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिजिएन झाओले भारतीय फौज चिनियाँ भूभागमा प्रवेश गरेर आक्रमण गरेपछि भीषण युद्ध निम्तिएको बताए।
उनले चिनियाँ फौजको हताहतबारे भने विवरण दिएनन्। शुक्रवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुनै पनि विदेशी सेना भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश नगरेको र भारतीय भूमि नगुमेको बताएका थिए। गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तमा बीस भारतीय सैनिक मारिएका थिए। भारतले भिडन्तमा दुवै पक्षको क्षति भएको बताएको छ।
चीन घटनाबारे के भन्छ ?
एकपछि अर्को ट्वीट गर्दै झाओले गलवान उपत्यका चिनियाँ भूमिमा पर्ने बताए। दुई आणविक शक्ति सम्पन्न यी दुई देशबीच यो क्षेत्रमा सीमा रेखा स्पष्ट छैन त्यसैले राम्रोसँग सीमाङ्कन नगरिएको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल एलएसी मानिन्छ।
झाओले चिनियाँ र भारतीय अधिकारीबीच मे महिनामा सम्झौता भएपछि चिनियाँ क्षेत्रमा बनाएको संरचना भारतले भत्काएर सुरक्षा फौज फिर्ता लगेपछि तनाव घट्दै गएका बेला घटना भएको बताएका छन्।
झाओले भने, गलवान उपत्यकामा स्थिति सामान्य बन्दै गएका बेला जुन १५ तारिखका दिन फेरि भारतीयहरूले नियन्त्रित सीमा रेखा ‘एलएसी’ पार गरे। उनले भने, सीमामा खटिएका भारतीय फौजले चिनियाँ अधिकारी र सिपाहीहरूमाथि हिंस्रक आक्रमण गरे त्यसपछि भिडन्त भयो र मानिसहरू मारिए।
भारतीयहरूले गलवान उपत्यकामा एप्रिल यता नियन्त्रित सीमा रेखामा ूसडकहरू पुलहरू र अरू संरचनाहरूू बनाइरहेको झाओले बताए।
मोदीले त्यसबारे के भने?
शुक्रवार टेलिभिजनमार्फत् दिइएको एउटा वक्तव्यमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय भूभागको रक्षाका लागि भारतीय सशस्त्र फौजलाई आवश्यक कदमहरू चाल्नका लागि अधिकारू दिइएको बताए।
चीनले चालेका कदमहरूबाट पूरै देशले चित्त दुखाएको छ र आक्रोशित बनेको छ,उनले भने, भारत आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई शिरमा राखेर शान्ति र मित्रता चाहन्छ। सोमवारको झडपपछि बोल्दै मोदीले भने, न कोही विदेशी हाम्रो भूभागमा छ न हाम्रो कुनै चौकी कब्जा भएको छ।
भारत र चीनबीचको विद्यमान तनावका माझ अमेरिकाले ढिला गरी प्रतिक्रिया जनाएको बताइएको छ। अमेरिकाले जुन १९ तारिख शुक्रवार प्रतिक्रिया दिँदै भारतप्रति आफ्नो संवेदना प्रकट गरेको हो।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले उक्त घटनाबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने, चीनसँगको सङ्घर्षका क्रममा भएको मृत्युलाई लिएर हामी भारतप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्छौँ। हामी ती सैनिकका परिवार, आत्मीयजन र समुदायलाई सम्झन्छौं त्यस्तो बेला जब उनीहरू शोकमा डुबेका छन्।
पुराना अनुभवमा भारत र चीनबीच तनावको स्थिति हुने बितिक्कै अमेरिकाले तत्काल प्रतिक्रिया दिन्थ्यो। गत मे महिनामा भारत र चीनबीच तनावको स्थिति सुरु भएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मे महिनाको अन्तिम साता मध्यस्थताका लागि प्रस्ताव पनि गरेका थिए।
त्यसभन्दा पहिला पनि थुप्रै पटक उनले भारत र पाकिस्तानबीच ट्रम्पले मध्यस्थताका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। दक्षिण एशियामा आफ्नो बलियो कूटनीतिक उपस्थितिलाई लिएर अमेरिका सधैँ सचेत रहन्छ।
त्यसैले उ भारत-पाकिस्तान वा भारत(चीनबीच तनाव रहेका बेला मध्यस्थताको लागि प्रस्ताव गर्न पछि हट्दैन। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा उक्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढेको देख्दा लाग्छ अमेरिका यो क्षेत्रमा आफ्नो स्थितिलाई लिएर संशयमा देखिन्छ।